Magangelyo: – Asylbyrån
Magangelyo macnaheedu waa amaan. Marka aad codsato magangalyo macnaheedu wuxuu yahay inaad ka codsanayso badbaado ama amaan dal kale oo aan ahayn dalkaaga hooyo. Ma’aad rabta in aad ku hesho ammaan Iswiidhan waxa aad codsigaaga magangelyadda dhigaysaa booliska xuduudka aad ka doo galshey Iswiidhan. Ama meel ka mid ah xafiisyada codsiga ee waaxada socdaalka. Ma dici karto in aad soo cosdato magangaliyo adiga oo aan so gelin dalkan. Adigaaga magangeliyo codsadaha ah waxaad badanaa xaq u leedahay qareen ama sharci yaqaan o ah qof ka wakiil ah.Adiga ayaa mar walba xaq u leh innad codsatto qareenka aad rabto marka aad rabto innad magangelyo ka codsato Iswidhan. Haddi aanad adigu codsanin qareen khaas ah waxa hay’adda socdalku kuu dooreysaa wakiil guud. Aad ayay u adagtahay inaad bedelsho qareenka haddi ay hore hayaadda waaxda socdaalka mid kuu qabatay.
Sidda darteed waxaa haboon in aad codsato qareen adiga kaa wakiil ah isla markaa aad codsanayso magangaliyada, ila aad dooneyso wakiil khaas kuu ah oo ku garab fadhiya inta arrintaada hawsheedo lagu jiro. Dhamaan sharci yaqaanada ka tirsan xafiiska yaga (Asylbyrån) waa qareeno. Markaa way toosan tahay inaad u sheegto codsigaaga innad dalbanaysid qareen ka mid ah xafiiskaan marka aad codsaneysid magangelyo.
Waaxda socdalka ayaa bixineysa kharashka ku baxaya garyaqaanka ay iyagu kuu qabteen. In uu/ay qareen ahan qadiyadaada kugu doodo. Dhamman waxii xariir ah ee aad qareen ama garyaqan la yeelato inta ka horeysa go’aanka laguugu so magacaabayo qareen adiga ayaa kharashkeeda isu qaba.
Ma u baahan tahay in aad iswiidhan ka codsato magangelyo?
Gacmo furan ku soo dhowoow hadii aad u baahan tahay kaalmo xagga sharciga. Ku soo buuxi warqadaan hoose markaa annaga ayaa kuula so xiriirayna.